Counter Strike 1.6: Sida ugu fiican ee loogu ciyaaro FPS-kan GNU / Linux! | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, waxaan mar kale u hibeyn doonnaa gelitaanka ah Waqtiga firaaqada iyo madadaalada ku saabsan GNU / Linux, gaar ahaan ku saabsan Garoonka Gamer, taasi waa, Ciyaaraha. Tan iyo, da 'kasta oo aan noqon karno, dhammaantayo waan wada yaraa, oo sida xaqiiqada ah ilaa maantadan la joogo waannu xusuusannaa ciyaaro ciyaaraha fiidiyaha ama waxaan sii wadeynaa ciyaarista fiidiyowyo fiidiyoow ah oo cusub, ama kuwo soo jireen ah iyo kuwo duug ah, sida, "Counter Strike 1.6".
Haa "Counter Strike 1.6" ku saabsan GNU / Linux. Tan iyo, oraah caan ah Ciyaaraha FPS weli waxay u keentaa xamaasad iyo reyn reyn carruur badan, dhalinyaro iyo dad waaweyn, in kasta oo ay jirtay in ka badan 20 sano.
Xaqiiqdi, "Counter Strike 1.6" Ma ahan bilaash mana furna, laakiin markay tahay la ciyaarida asxaabta maanta, iyo gaar ahaan kuwii hore, waxaan awood u yeelan karnaa inaan iska indhatirno, daqiiqad wadaag ah caafimaad, oo aan la isticmaalin Ciyaar bilaash ah oo furan, inkasta oo ay jiraan kuwa badan iyo fiican in ay jiraan, sidaan horeyba ugu sheegnay daabacado kale oo hore oo laxiriira.
Qaar ka mid ah waxaan hoos uga tagi doonnaa baaritaan dheeraad ah, kuwa daneynaya Ciyaaraha FPS oo bilaash ah oo furan GNU / Linux:
"Dad badan ayay layaab ku noqotay, liistada ayaa dheer oo aad u xiiso badan, maaddaama ay suuragal tahay in qaar ay u maleeyaan in aysan jirin dalab weyn oo loo heli karo Linux ee Ciyaaraha FPS, hase yeeshe, xaqiiqadu waxay ina tusaysaa taas lidkeeda." FPS: Ciyaaraha Qofka Ugu Horreeya ee Shooter Ayaa Loogu Heli Karaa Linux
Rexuiz, Trepidaton iyo Smokin 'Qoryaha: 3 Ciyaaraha FPS oo dheeri ah oo loogu talagalay GNU / Linux
Tartan la'aan: Nooca cusub ee nooca Beta 0.52 ee FPS bilaashka ah iyo furan
1 Counter Strike 1.6: Ciyaaraha FPS
1.1 Waa maxay Counter Strike 1.6?
1.2 Sidee si fudud loogu rakibi karaa loona ciyaari karaa Counter Strike 1.6 ee GNU / Linux?
1.2.1 Ku rakibidda Counter Strike 1.6 iyada oo loo marayo AppImage
Counter Strike 1.6: Ciyaaraha FPS
Waa maxay Counter Strike 1.6?
Sida inbadan oo naga mid ah horey u ogtahay, "Counter Strike 1.6" waa dunida caan ka ah nooca ugu dambeeya ee taxanaha ugu horreeya ee Ciyaarta Counter Strike waxaa abuuray Shirkadda Valve. Taas ka sokow, waxaa la sii daayay in ka badan 20 sano ka hor. Taasna ilaa maanta, waxay leedahay sumcad ciyaarta cibaadada ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu horreeya uguna horumarsan cayaaraha internetka ee qofka ugu horreeya toogashada (FPS).
Tan iyo, qoraalkani wuxuu ku saabsan yahay sida loo rakibo si loogu ciyaaro si fudud oo dhaqso leh GNU / LinuxUma baari doonno saldhigyada horay loo ogaa ee Ciyaarta, si kastaba ha noqotee, macluumaad badan oo faa'iido leh oo casriyeysan ayaa laga heli karaa arrintan iyo dhammaan Taxanaha Ciyaarta Weerarka, ee Madal uumi:
"Ku raaxayso ciyaarta waxqabadka internetka, Lambarka -1 adduunka. Ku qufo naftaada kuleylka dagaalka ugu macquulsan ee argagixisanimo ee kooxdan caanka ah ee caanka ah. La shaqee saaxiibbadaada si aad uga guuleysato hawlgallada istiraatiijiyadeed, weerarada saldhigyada cadowga, la haystayaasha samatabbixinta, iyo xusuusnow in dabeecaddaadu ay wax ku biirinayso guusha kooxda iyo tan ka soo horjeedda." La Dagaalanka Weerarka ee Uumiga
Sidee si fudud loogu rakibi karaa loona ciyaari karaa Counter Strike 1.6 ee GNU / Linux?
Xaqiiqdii Linuxeros badan, ayaa hadda ciyaara "Counter Strike 1.6" ku saabsan GNU / Linux iyada oo loo marayo Steam, ama adeegsiga Khamri, ama ku socodsiinaya Navator-ka, taas oo ah, khadka tooska ah ee shabakadda oo la mid ah CS-ONLINE.NAADIGASi kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara fursado kale, sida kuwa soo socda:
Ku rakibidda Counter Strike 1.6 iyada oo loo marayo AppImage
Si aad uga faa'iideysato rakibayaal gudaha Qaabka ".AppImage", waa inaan marka hore tagnaa oo aan kala soo baxnaa waxyaabaha soo socda isku xirka, oo si toos ah ugu hogaaminaysa, kanaalka Telegram ee lagu magacaabo "AppimageHub".
Ka dib markii si guul leh loo soo dajiyo oo la fuliyo faylka ".AppImage", waxay abuuri doontaa on the Liiska Codsiyada oo ka mid ah GNU / Linux Distro loo isticmaalay, 2 toobiye, mid loogu talagalay "Counter Strike 1.6" iyo mid kale oo loogu talagalay "Nolosha badh".
Halkan laga bilaabo, waxa keliya oo hadhay ah in la helo server la heli karo oo lala ciyaari karo iyo asxaab la socota oo bilaabi kara ciyaaro xiiso leh oo xiiso leh.
Tusaale ahaan, kiiskeyga shaqsiyeed, waxaan doorbidaa inaan ciyaaro "Argagixiso Magaalo 4". Laakiin mararka qaarkood waan ciyaaraa "Counter Strike 1.6" asxaabta Kooxda Telegram loo yaqaan Ku ciyaarida GNU / Linux. Marka taariikhda ciyaarta la isku duwo, ciyaarta ayaa la bilaabay oo furaha ayaa la riixayaa. «| » taas oo badiyaa ka hooseysa furaha «Esc».
Tani waxay fureysaa isku xirnaansho ku saabsan server-ka ciyaarta ee kooxda, iyo jumlada soo socota ayaa loo qoray si loogu xiro: connect patojad.mooo.com:27016
Markaad gudaha gasho, waxaa kuu hadhay oo keliya inaad la baashaalto asxaabtii ay ka soo qayb galeen! Marka waa inaad kaliya abuur ama ku biir koox, ciyaar on server kasta oo aad dooratay.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan sida loo rakibo loona ciyaaro el Ciyaaraha FPS loo yaqaan «Counter Strike 1.6»; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Counter Strike 1.6: Sida ugu fiican ee loogu ciyaaro FPS-kan GNU / Linux!
Ku jawaab david_exkeletor
Waad salaaman tahay, Daa'uud. Raaxo
Nvidia sidoo kale waxay dooneysaa inay gasho suuqa wadista gawaarida ee madaxbanaan waxayna heshay DeepMap